Kutanga kutumira kwegore | Kubva kuLinux
Chekutanga posvo yegore
diazepan | | Kugoverwa, GNU / Linux, Noticias
Zvinotaridza kuti chinyorwa changu nezveCUTI chakaiswa panguva chaiyo nekuti pakanga pasina zvitsva zvapashure. Nhasi ndiri kuzonyora zvidimbu zviviri zvakasiyana zvemashoko:
1) Nhamba yechipiri (nhamba yechitatu) ye HDMagazine
Iyi shanduro nyowani inoverengeka seyakajeka hurukuro naEugenia Bahit naRichard Stallman, pamusoro pekuve nezvinhu zvinotevera:
1. Kudzivirirwa kwekurwiswa kwechisimba uye Munhu ari Pakati
2. Backups: Ndinogara ndichivarangarira kana vasipo!
4. NoSQL Yakakosha: Sumo yeNoSQL uye gore masevhisi
5. NoSQL yakakosha: chimiro chemukati, kodhi uye mamiriro.
6. Kukanda: Fungidzira, chirongwa, govana.
7. PHP Webhu Kunyorera Chengetedzo Nongedzo
8. Mapatani uye dhizaini anti-mapatani Ndeapi acho?
9. Kuedza nematplotlib uye mamwe "yuyos"
10. MVC Chinyorwa: (2) Dynamic Views uye Matemplate
11. Enda GNU / Linux neArch Linux: Chikamu II
12. Kuongorora Apache yekuwana matanda
2) Chinzvimbo che Distrowatch ye2012
Isu tatoziva kuti haisi yakanyanya kuvimbika chinzvimbo, asi inotorwa seyakaenzana mareferenzi ezvimwe zvinhu.
Mint inogara yakagadzikana munzvimbo ye1 yegore rechipiri rakateedzana, Mageia anopfura uye anobvuta nzvimbo yechipiri kubva kuUbuntu (iyo inowira kune yechitatu), ichipedzisa yepamusoro gumi: Fedora, OpenSuse, Debian, Arch, PCLinuxOS, CentOS uye Puppy. Snowlinux, Pear, SolusOS uye ROSA inoratidzirwa seyakanakisa debuts (ese mana ari pamusoro epamusoro 10)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Chekutanga posvo yegore
Yakanaka, yechitatu kuburitswa kweHackers neVagadziri, uye kudzokorodza… ini handisati ndaziva, handisi kukwanisa kuona kuti Mageia angatora sei nzvimbo yechipiri. Kunyange zita harinzwi.
Uye Arch iri munzvimbo yechinomwe ¬¬
Asi Zvakanaka, sekutaura kwemupepeti, haina kuvimbika zvakanyanya.
Yakakura kune HD M. Kuverenga ...
Tsitsi ndinonetsana naArch asi ini ndawana: Netrunner; ramangwana Kubuntu !!!
Mageia !!! uuuuu ndaigona kunyora zvakanaka.
Anofara kutanga gore !!!!!!!
Kutenda kwekutanga kutumira, ini ndinoshandisa Mint KDE nekuti nezvese zvandaiyedza ndiyo yaive yakapusa uye "inogona kuumbika", kunyangwe ndaizoda kusiya Pear kana ROSA, ndisingakanganwe Fuduntu inoshanda zvakakwana pamabhuku, ndakaiyedza pane akati wandei uye mhedzisiro yacho yakanaka.
Ini ndoda kuita fomati yangu yegore kuti ndisiye yakagadzika uye yakapusa kubata distro, ndinoda kukubvunza iwe pasina shungu kana fanaticism kukurudzira distro yeiyo Samsung RV408 laptop ine 6 GB RAM yandinoshandisa kuongorora, kuona mafirimu, kuteerera mimhanzi uye kunyora basa , Impress uye PDF uye zvimwe zvidhori zvekare.
Uye kune imi mose, ndinoshuva kuti muna 2013 mukwanise kuona zviroto zvenyu.
Ubuntu 12.04.1, ramangwana Fedora 18 uye Arch ndiwo andinokurudzira.
Arch iri recontra kugadzikana kushandisa, kubata uye kudzidza, nekure kuresa kwese ma distros aripo, kunyangwe iine nharaunda diki - zvichienzaniswa nema distros akadai seUbuntu, Fedora, Gentoo, Debian kana kunyange kuvhuraSUSE - inoita nguva zhinji kuzadzisa unoshuvira mashandiro iwe unofanirwa kudzidza kuzviita uri wega, iro risiri dambudziko kana uine yakawanda yemahara nguva (asi iri mukana nekuti inomanikidza iwe kudzidza nechisimba!). Nekudaro, uye mukupesana nedzimwe nzvimbo hombe (ini handisi kuzopa mazita!) Kunyangwe iyo Arch iri diki, inharaunda yevanhu vanoziva zvakawanda (A LOT), zvakanyanya muchimiro cheGentoo, Debian kana nharaunda dzeSlack.
Kana iwe uchida KDE SC uye uine nguva yekumisikidza uye kukwidziridza muchina wako, gadza Arch, hauzombozvidemba, yakanaka, kumusoro-up-to-software mune yakasimba, inokurumidza (kwazvo), yemazuva ano uye hyper-mwenje distro . Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakakosheswa uko zvese zvinoshanda kubva pakutanga ndinofunga kuti Linux Mint KDE SC ndiyo yakanakisa sarudzo (kwandiri zvirinani kupfuura Kubuntu pachayo) uye iwe uchave nechokwadi chakazara kuenderana neUbuntu, hapana zvishoma data.
Dambudziko guru chete neLinux Mint kana chero imwe * buntu inyaya yePPAs: kuve neazvino software pane * buntu iwe unogara uchipedzisira uchiwedzera maPPAs sezvo distro inogadziridza shanduro dzemapurogiramu akaiswa mwedzi mitanhatu yega yega (kusazvibata kwakatove iko pamapuratifomu akadai seWindows kana MacOS kana Arch Linux pachayo inoenderera ichivandudzwa nekukurumidza kana ivo vanogadzira vazivisa vhezheni yacho yakatsiga).
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuve nemakakatanwa ekugadzirisa pakati peshanduro uye kuti iwe unogara uchifanira kuongorora runyorwa rwePPAs mushure mekugadzirisa kubva kune imwe vhezheni yesystem kuenda kune imwe sezvo akawanda marekodhi achasiiwa munzira kana kutora nguva inoshanduka yekugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni yebuntu.
Kwaziso uye «Happy New Year» 😀
Nezve Arch, kana ichinyatso gadzikana, kushandisa pacman yaourt Aur, iyo yaizondidzosa ndisina kufunga kuArch. Kugadziridza nguva dzose kana kugara uri pamberi pechiso ndicho chikonzero chekutanga kuchinjira kune debian.
Ndanga ndichingoshandisa Debian kwenguva pfupi uye idombo 😀
Iyo distro yakafanana nayo uye ini ndinoifarira ndeye Sabayon, iri kumberi, kwete zvakanyanya senge arch asi ini ndinoiona ichigadzikana uye yakapusa.
Zvakangoitikawo, nezuro ndakanga ndiine Sabayon 10 KDE SC marathon!
iyo nharaunda yakanyatso pedzwa uye inowanzo shanda zvakakwana - kune zvakare kune kwese kwekushongedza tweaks kune yega yega mushandisi senge yekumisa antialiasing, nezvimwe.
.Rigo inoshamisa, ndinoshuva kuti dai paine chimwe chinhu chakafanana mune yakasara yeGNU / Linux nyika 😀 - Zvakakomba, ndakaida, ndiyo chete inomira yekumira kuti urambe uchivandudzwa nenhau dzemunharaunda, kugadzirisa system yako uye kuisa kana kubvisa zvirongwa. Izvo zvakanaka, zvakagadzikana uye zvinoshanda chaizvo.
Iyo system bar bhaisikopo yakanyatso kubatanidzwa uye inogutsa zvakakwana basa rayo
KDE SC irikuita mushe mushe: inoteerera uye hainzwi inorema. Kana uchienzanisa zvakanaka unofanira kuzviedza pane chaicho HW pachinzvimbo chemuchina. rakapotsa.
SeNerd, chandinonyanya kufarira nezveSabayon ndiko kukoshesa kwavanobhadhara kune kernel uye zvimwe zvekuchengetedza zvakanyorwa pane peji rekurodha; hunhu ihwo hwoga (uye kuti i100% Gentoo) zvave kundirerekera kuti ndisarudze Sabayon pamusoro pemamwe ma distros.
.Gentoo imbambaira inotapira !!!! Ndokumbirawo, Gentoo's yekuvandudza system inogona kunge isiri soooooooo, asi soooooo zvakanyanyisa kunonoka !!! Kamwe payakadzikisira iyo 500mbs yekuvandudza (KDE SC 4.9 kusvika 4.9.4) yaive zvishoma kupfuura awa kusvikira pakupedzisira vasiya iyo system yakagadziridzwa.
.Gentoo inoshanduka zvinoshamisa mukuti inonyatsosiya zvese kusvika kumushandisi wayo kuti aite zvavanoda nesystem yavo ... asi Portage iri TOO inononoka, kunyangwe iwo magirazi achivandudzwa. Uye zvakare, Gentoo inoomesa yakapusa uye inova yakaoma zvachose sisitimu kana zvasvika pakuzvibata zuva nezuva. Kuva nekugadzira zvinyorwa zvemakanda, mafaera ekugadzirisa, nezvimwewo, zvinorema uye hazvina musoro.
Munguva yekuvandudzwa kweiyo ichangobva kuiswa system, kuwanda kwemhosho kwakaonekwa: http://imgur.com/a/2ESs2
Unogona kuona kuti Sabayon 10 anga achinyatso chenjera uye kuti anga achichinja zvine mutsindo asi:
Iko kusanzwisisika kwemukati kweGentoo hakuwedzeri chero chinhu kune sisitimu senge Sabayon uko mapakeji anofanirwa kuiswa ari emabhinari uye achigadzira mapakeji kubva pakutanga achitora mukana wechinhu chikuru cheGentoo anogona kukanganisa hurongwa hwese.
kunyangwe mhedzisiro yetsika Gentoo system inogona kukurumidza kuita (saka zita, Gentoo ndiyo inokurumidza penguin) system yekumisikidza uye kugadzirisa kunorwadza
Chekupedzisira, nezve yako "kutengesa" naDebian:
Ichokwadi kuti dzimwe nguva kumhanya-mhanya kwesystem inogadziridza kunogona kunge kuchikatyamadza - uye kutogumbura kana zvese zvatiri isu tichida kuita mushe kuita rimwe basa, zvisinei nekureruka kwaro mukati ndiko kunoita kuti zvikonere kuti ndirege, kuwedzera, kana uchinge waita sisitimu ichimhanya sezvaunogona kuenderera nekuishandisa sekureba sekuda kwaunoita iwe usina kuivandudza, saka unenge uine hunhu hwakafanana nehumwe hwakafanana-husiri maRR masisitimu =)
Kumba ndine webhu uye ndinodhinda server iyo yazvino inoshandisa Ubuntu Server 12.10 (iyo yandakaseta zvakajeka kuti irege kuita ngura neDebian / Ubuntu) uye kunyangwe iri nyore kwazvo kuti usatombonetseka nezvayo kunze kwekuisa zvidziviriro zvekuchengetedza zvishoma nezvishoma , pese pandinofanira kubata nehurongwa iri padyo-nhamo (zvese zvakagara nhaka kubva kunaDebian):
Nei dhairekitori uko mafaera eApache2 akaiswa anonzi apache2 (/ etc / apache2) apo zita raakapihwa nekukwira kuri / etc / httpd (zita rinoremekedzwa naArch)?
Zvakare, iyo system iyo Debian inobvarura iyo http.conf faira uye kumisikidza kwainoita kwe symlinks kune akaomeswa kana ekupaka masosi anoshamisa, ndiani akauya nehunyanzvi hwakadai?
Kana semuenzaniso BIND9, uko muDebian mafaera ekumisikidza akapatsanurwa kuita madiki madiki matatu pane kuti ese ave mu / etc sezvakagadzirwa zvakajeka neve devs?
Kudzoka, chaizvo zvakafanana zvavanoita neininx !!!
Handishamiswe kuti muDebian zvinotora nguva yakareba kuti zvigadzirise zvinyorwa kana software yega yega yavanopa ichibatwa nenzira yakadai!
Pasina kutaura nezve kuyedzwa kwakadzika kunofanirwa kuitwa kutarisa kuti vanoshanda mushe mushe!
Iyo imwe sevha yandinayo ndeye yemhasuru imwe: Ini ndinoishandisa seNAS, kuumbiridza uye pamusoro pezvose kumhanyisa michina chaiyo yandinowana ndichishandisa X2Go (imwe nzira yakanaka yeFreeNX kunyange isingaenderane nebazi reNX-3.5) kudzamara ini edza phpvirtualbox.
Izvo zvinomhanya Arch (chii chimwe!) Uye kunyangwe ini ndichiishandisa senzvimbo yekuyedza zvese, haina kumbondiburitsa. Sezvo ini ndiri simbe, simbe kwazvo, senge ese (akanaka, ndinofanira kutaura!?) Sysadmins uye sezvo komputa isina kubatana zvakanangana nemambure ini ndinoigadziridza zvishoma nezvishoma uye kuverenga nhau pamusoro pezvakakwenenzverwa kwakaringana kuenderana zuva. Chekupedzisira, ini handimbo gadziridza kunyorera kuri kuita mushe kunyangwe nyowani vhezheni dzikabuda, kana dzichishanda, nei uchinja? Izvo zvakasiyana kana iyo nyowani vhezheni yezvirongwa izvi ichiunza mabasa anondinakidza, mune iyo kesi ini ndinovaedza muVM uye kana ikashanda zvakanaka ndinoirasa muhurongwa kunyangwe dzimwe nguva ini ndinomirira zvakananga mwedzi yakati kuti ndione mhinduro kubva nharaunda uye ndinozvinunura ndichivaedza ndega.
Kwazisai uye muve - muve nemunhu wese! - yakanaka 2013!
Ini ndakaburitsa zvinoenderana neyako kurudziro yekuyedza Arch uye yakaita manyonganiso ekutanga, zvinondibvunza password uye zvimwe zvinhu ... Ndingaite sei kukurudzira kune mutsva kubva kuW $ a distro yandisingakwanise kana kuisa? Chandinoda kukwezva vanhu kuLinux, kwete kuti ivo vanoramba vachizviona sechinhu chakaoma uye chakaoma kushandisa. Kutenda netsananguro yako uye nevavariro yakanaka.
Kwaziso uye Goredzva Rakanaka 😀
Neche mukana, ini ndakaisa sabayon X palaptop yevabereki vangu (bvisa win7).
Iyo yakaiswa mu10 min, yakagadziridzwa mu30 min (487 mapakeji), ini ndinoona hw hw yese. Iyo 10-distro
"Gentoo inononoka" Hongu, asi kugadzikana kwayo kunozviitira. Ndozvandinotaura 😀
Kurumidza padivi, gentoo inoshamisa chose.
Iko kupfeka sutu yakashongedzwa uye inoenderana nezvinodiwa.
Hahaha ndakatengesa Debian, zvinogona kudaro, ndanga ndichishandisa arch kwemakore matatu uye ini ndauya kuzozviona seyakanakisa Linux distro.
Zvino sezvo mazororo apera (ndasara nemavhiki maviri: O) ndiri kutsvaga distro, kwandisingarwisane nehurongwa kana kuita matambudziko nekuda kwekumisikidzwa. (Nezve izvo ini ndine Windows hahahahaha ndiri kutamba.)
Ndiine arch ini ndinofanira kuve nekaviri kana mana ekuvandudzwa kwandakadzoreredza sisitimu, ikozvino ndaedza kuisa arch uye yevhidhiyo kadhi, haindibvumidze. (Iyo ATI, kutyisa kwese linux). Uye chaizvo, Arch akandidyisa.
Kunyangwe nematambudziko ayo, debian anowirirana zvakanaka neangu desktop pc. Kunyangwe ndiri kufunga kuisa gentoo 😀
Ndiri kuyedzawo neSlackware, asi ini handina kunyatsogutsikana.
Parizvino debian uye sabayon zvakandifadza kwazvo.
Kunyangwe paine chirevo pakati peVapfuri.
«Kana yaiswa, unogara uchidzoka» uye zvakaitika kwandiri kakawanda 😀
Thanks ... ini handidi Ubuntu, ndinofarira Kubuntu, Fedora inondinetsa nezvikamu uye .rpm neArch painotanga kuisa inondibvunza password uye zvimwe zvinhu izvo newbie yandisingakwanise kubata, chandiri kutsvaga idistro yandinogona kuisa nekushandisa nyore uye zvakare kurudzira nemuenzaniso (ndokuti, kuzviratidza) kune avo vanoda kurambana W $.
Ahhh ah, ini handina kuziva kuti iwe urikuita shanduko uye kukurudzira vateveri vatsva kudivi raBright !! (iro rima iro Windows, iwe unoziva!).
Ndinoenderana newe ipapo, pachezvangu ndakatanga neUbuntu uye nekuti ini ndoda tekinoroji panguva yandakachinjira kuArch. Chaizvoizvo mushure mechinguva kubva kuUbuntu (7.04 kusvika 9.04, ndinofunga) ini ndaida kutamira kuKDE uye ndakamirira vhezheni 9.10 sezvo mune dzapfuura dzaive dzisiri kufamba zvakanaka.
Kubuntu 9.10 yakaratidza kuve ine njodzi sedzese shanduro dzekare uye mushure memasvondo maviri ndakatanga kunyatso tarisa ese DistroWatch.com distros. Pandakawana Arch (netsaona sezvo yanga isiri pane iyo rondedzero panguva iyoyo, ndinofunga) ndakadanana nepfungwa yeKISS yedistro ndikasarudza kuiisa kuyedza KDE nekuti zvandaitsvaga musimboti yaive distro yaizomhanya KDE zvakanaka.
Panguva iyoyo chete muArch vakaita shanduko kubva ku KDEmod (iyo yakazova Chakra) kuenda kuzere-KDE saka pandakaiisa ndikatarisa kuti KDE yainge ichiita zvakadii ichienzaniswa nemamwe ma distros andaive ndaedza ini ndaiziva kuti pane chinhu inokosha.
Nekufamba kwenguva ndakazoziva sisitimu zvakadzama uye panguva imwecheteyo ndakatanga kushanda pane masystem nemamwe ma distros uye ndakaona kwakapusa nyore kweArch.
Mune yako chaiyo kesi, ini ndinofunga kune maviri akakosha ma distros ekuti iwe uedze uye anosangana nehunhu iwe hwauri kutsvaga:
1. regai zvese zviende !!
2. zviite nyore kuisa
3. zviite nyore kushandisa
4. izvo zvinokwezva uye zvinokwezva vateereri vatsva.
yekutanga OS uye Linux Mint, ese ari maviri akavakirwa Ubuntu uye bhanari inoenderana, ndiko kuti iyo .DEB yakagadzirirwa Ubuntu inogona kushandiswa pasina matambudziko mune aya distros.
Panyaya yeiyo yekutanga OS, yakavakirwa paUbutnu 12.04 LTS uye ine rutsigiro kwemakore mashanu. Iyo distro inotevera pfungwa yeApple neMacOS yayo: kupa zvine simba kunyorera asi nekodzero uye nesarudzo dzakakodzera dzinoshandiswa nevazhinji vashandisi mazuva ese. Nenzira iyi, iyo distro ine yayo mashandisirwo ayo anotaridzika sooo asi akanaka kwazvo, uye sezvo chishandiso chimwe nechimwe chisina "kudzipwa" huwandu hwesarudzo, vashandisi vekupedzisira vanowana iyo distro inoshanda zvakanyanya sezvo ivo vasina "kurasika" muchirongwa. Ini ndakaisira iyi distro yehanzvadzi yangu. pabhuku rake, aive neLinux Mint 13 Cinnamon uye akati «akanaka sei !!! enda mutorwa! hapana chekuita nezvandaive ndaisa kare, zvinoita kunge prehistoric padhuze neizvi, ndatenda !!! »
Linux Mint: Makuhwa anoti Linux Mint iri "Ubuntu yaita zvakanaka" kunyangwe chokwadi chiri chekuti nepo Ubuntu ichienderera ichikura nekusvetuka uye nemuganhu uye iri mukushanduka kwakazara muMint vakazvipira kugadzirisa Ubuntu uye nekupa ruzivo rwevashandisi vechinyakare.
Kune akatiwandei mavhezheni eLinux Mint aunogona kuisa zvinoenderana neiyo HW kugona kwemushandisi mushandisi, asi pasina kupokana inokatyamadza zvikuru ndeyeCinnamon (yakavakirwa paGNOME 3 uye mukushanda kuri kusimukira) uye KDE SC.
Kunyanya iyo KDE SC vhezheni yeLinux Mint, izvozvi for 4.9.4, ndiko kuti yekupedzisira, yakanaka uye inoratidzika kunge yakanaka kwazvo, yakashambidzika, yakakwenenzverwa, iko iko inoshanda zvirinani kupfuura Kubuntu pachayo uye ini ndinoikurudzira pamusoro Kubuntu kubvira iyi yekupedzisira distro yakafanana nenyaya yepombi yakanaka: inogara iine 20 ctvs isipo. yehuremu: Q chinhu icho muLinux Mint iwe chausinga cherekedze uye kuti pamusoro pekuonekwa neimwe bhagi vanoigadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona, havamirire inotevera vhezheni.
Kana paine chimwe chinhu chandichagara ndichitenda Kubuntu nacho, ndechekuita kuti ndizive Arch kumashure muna9.10 mushure mekundidzikisira pamwe neshanduro dzese dzekare. Dai Kubuntu anga achiita zvakanaka, ingangove iri muArch nhasi asi ini ndaizoikurudzira ...
Ahhhh ehe, ndanga ndisingazive kuti hauna kunge uri pane izvi kwenguva yakareba. Kazhinji, izvo zvandinoratidza shamwari dzangu dzeWindows ndiFedora KDE, uye dzimwe nguva vanovhiringidzika, ini ndatotama vatatu vevamwe vangu zvachose kuLinux, akati wandei atove kuyedza. Nezve izvo zvinonetsa, ini ndinokurudzira se @msx Linux Mint, Elementary, nevamwe vakaita saSolusOS, PCLinuxOS inoti. Zano rangu nderekuti kana iwe ukawana ruzivo, kana nekufamba kwenguva iwe uchida kudzidza, ipa Archlinux kuravira, ini ndaive ndakabatiswa.
@Ghermain, kana zvikafamba mushe, shandisa Kubuntu. Ndinokurudzira kuti iwe uteedzere aya mirairo kune iyo Samsung:
Kune iwo mabasa ezuva nezuva iwe unogona kusarudza iyo imwechete Ubuntu kana zvimwe zvimwe zvacho zvinosanganisira macodec odhiyo uye mamwe anofambisa basa rako paPC yako;)!
Anokuitira zvakanaka kwazvo asi nekuda kwekuravira kwangu uye vatsva veW $ Ubuntu zvinoita kunge "zvakatsetseka" pachinzvimbo chero distro neKDE, iyo yatiri kufarira nezvayo.
Ndine mune rondedzero Pear Linux (MAC uye yakajeka nharaunda), Rosa (kunyangwe dzimwe nguva admin isingazive; ndinofunga ndichairasa) uye Linux Mint 14 KDE. Mu "soaking" Sabayon naChakra asi ini handifarire zvidimbu zvidiki zvavanogadzira nemamwe mapurogiramu akaita seFirefox, LibreOffice, Thunderbird nemamwe asiri mahara, "disk" zvekuti rinoita nechirongwa rinotaridzika zvinotyisa.
Zvinondirova kuti Manjaro haisi pachinyorwa. Zvichadaro nekuti ichiri nyowani.
Kutenda nemagazini. Kuverenga !! 🙂
Uye kufara gore idzva !!
Manjaro aive nemakore makumi mashanu nemaviri
Ichiri kuzasi, asi ndinovimba ichakwira. Akafanirwa nazvo. Vakaita basa rakakura kuvandudza kushandiswa kwe arch.
Iyo yakadzika kwazvo patafura yegore, asi mune tafura yemwedzi mitanhatu iri muna makumi maviri nemana uye mumwedzi mitatu muna 6.
Ndatenda kwazvo Diazepan neruzivo, kuverenga kwakanaka kutanga gore.
mmm Dai ndaifanira kuisa mukurumbira chinzvimbo ...
Ini ndoda Arch Linux yangu neXFCE, ikozvino ndiri muchitoro cheApple
Unofara kutenga muna 2013.
Pasina kupokana, Chakra u Sabayon;)!
PS: Ndatenda neMagazini!
Goredzva Rakanaka kune vese!
Ndine ivo "vanozeya" asi ini handidi nzira iyo inogadzira yakanyanya mini disk pane yega-yemahara kunyorera.
Ufff! Mazuva mashanu asina kutumira chero chinhu. Ini ndanga ndave kutonakidzwa ...
Hehehe neniwo handina basa nazvo. Acute lecturitis, pasina mubvunzo iyi blog ine chimwe chinhu chinodhakisa mukugadzirwa kana mune zvakatumirwa. Mushure mechinguva ivo neimwe nzira vanounza subliminal mifananidzo panguva yekukwirisa iyo peji uye nokudaro vanotitora kuti tide kupinda XD.
Yakanaka ruzivo samazuva ese uye kutanga gore.
Ini ndaida kukuudza izvozvo, ndichitsvaga KDE distro kuti ndisiye pabhuku rangu. munhu anoshanda zvakanyanya necomputer science akandiudza kuti ndisatarise zvakare Kubuntu, Mint, OpenSuse, Chakra, Mageia, Sabanyon, nezvimwe ... kuisa Netrunner (http://www.netrunner-os.com/) nekuti ndiyo ace kumusoro ruoko rweBlueSystems, uye kuti ivo vakahaya programmers kuti vape nguva izere yekuipolisha.
Ini ndakatsvaga info kuburikidza neGoogle uye zvinoita sekunge mukomana uyu ari pachokwadi; saka ndakaburitsa 12.12 kubva kuX64, ndikaiisa uye ndakashamisika nekugadzikana uye nekukurumidza kwainoshanda, iine yakaderera zviwanikwa yekushandisa, inoziva zvese Hardware, uye inoisa chete anodiwa mafomu (LibreOffice, Gimp, Waini, Skype, VLC, kutumidza zita mashoma) mamwe ese iwe anoisa kune zvako zvaunoda, pamusoro peakanyanya kupenyesa aesthetic.
Izvo zvakakodzera kuti uzviedze uye senguva dzose rega isu tione ako anonzwisisika makomenti.
Nguva yekupedzisira pandakatarisa NetRunner yakanga isiri chinhu kunze kwekushambidza kumeso Kubuntu uye kusarudzika kusarudzwa kwemapakeji eGTK kufukidza zviripo Qt chirongwa mabasa, hazvo, barbaric hodgepodge; ehe, anga ane ruremekedzo kuna baba vake distro kubva panguva yaakange apinza zvese zvipembenene nehurema !!
Wakafarira NetRunner kupfuura Linux Mint (kunyangwe mapurojekiti ese ari maviri anoshanda pamwe chete)?
Ongororo yakanaka, ndatenda nezano!
Zvakanaka, ndakaifarira kupfuura Mint naKubuntu pachayo, uye kunyangwe ivo vese vachifambirana neBlueSystem, yazvino vhezheni 12.12 yeNetrunner yakanyorovera.
Sezvo yangu «apostolate» 🙂 yegore rino ra2013 kukwezva W $ vashandisi kuLinux, kugovera uku kunovasiya vasina remuromo, se newbie ini handinzwisise kuti chichava chii (uye ndinokumbira ruregerero nekusaziva) «GTK mapakeji ekuvhara mabasa. yezvirongwa zviripo muQt »asi kune izvo zvatinoda semabasa ekutanga, inozadzisa chinangwa chayo zana muzana.
Ichokwadi kuti yaive nezvikanganiso uye yaive isina hanya zvakanyanya asi ikozvino yakakomba uye kuti chimwe chinhu chihaye vanhu cheiyo projekiti chete.
Iwo maviri anonyanya kushandiswa 'maturikiti' kana 'maturusi emabhokisi' mune yemahara software ndeye GTK uye Qt.
Sebhokisi rekushandisa tinotsanangudza chaizvo izvo: seti yematurusi akaumbwa nemaraibhurari ekodhi, nzvimbo dziri pakati pechirongwa uye nehurongwa hwekushandisa, nzvimbo dzakabatana pakati pezvakarongedzwa nenzvimbo yedesktop yatiri kushandisa, nezvimwe. Ose maviri GTK neQt maC ++ machira, ndiko kuti, C ++ "machira"; izvi zvinoreva kuti turakiti yega yega ine mabasa anoita kuti zvive nyore kushandisa C ++ uye kudzivirira programmers kubva kunyora zviuru zvemitsetse yekodhi redundant kuita zvakafanana mabasa.
GNOME (Kubatana, GNOME / Shell, Cinnamon, Xfce, Lxde, nezvimwewo) inoshandisa GTK uye KDE SC (Razor Qt uye nyowani Be: Shell) shandisa Qt. Nenzira iyi GTK ine mabasa akasarudzika anoda imwe nhurikidzwa kuti iratidzike zvinoenderana munzvimbo yeKDE uye kuitira kuti iyo KDE nharaunda igonewo "kunzwisisa" izvo zvinokumbirwa neveGTK kwazviri, zvakafanana nezvikumbiro zveQt munzvimbo yeGTK.
Iye zvino, kuitira kuti zvishandiso zvakanyorwa muGTK zvigone kushandiswa mu KDE SC (uye zvinopesana, Qt zvinoshandiswa muGNOME) zvakafanira kuve nekuisa uye kurodha mundangariro nhevedzano yemaraibhurari ayo ndiwo anoshandura mirairo inopihwa nezvishandiso izvi. kuhurongwa.
Sezvo KDE SC iri desktop yakavakirwa paQt, zvinodikanwa kuti uise maraibhurari ekushandisa kweGTK kumhanyisa pakanzi desktop + raibhurari dzinodiwa kuitira kuti kuve nekuenderana kunoenderana pakati pavo, izvi zvinoita kuti zvive zvakakosha kushandisa zvimwe kugadzirisa zviwanikwa (CPU) uye ndangariro yekumhanyisa kunyorera kunyorera kuhurongwa - ok, mazuvano izvi rinenge risiri dambudziko nemakomputa achishandisa i3,5 kana 7 maprosesa uye ne4, 6, 8 uye anosvika gumi nematanhatu emadhigiramu ekurangarira sezvakajairwa kuona, ZVISINEI izvi EHE Iri dambudziko mumakomputa epamba anodhura akadai seCompaq AIOs matsva sezvo muchokwadi michina iyi ine maATOM processors uye isingapfuure 16gb ye RAM nemakadhi akabatanidzwa emifananidzo "pasi pehunhu" saka rinorema system rinokanganisa kushanda kwese kuita.
Ive nekuchenjerera, kune iko kushandiswa kunoshandiswa nevazhinji vashandisi kumuchina wavo, kunova kufamba nenzira yeFace $ hit uye zvishoma nezvishoma kuvhura izwi processor kana pikicha application uye teerera kumimhanzi, AIO ine Atom yasara, nyaya ndeyekuti munhu anoshandisa iyo muchina unopfuura ipapo, iwe uchazoda kuti usimudzire iyo software kana kushandisa masystem akareruka.
Kudzokera kumubvunzo wako, munguva yakapfuura ichokwadi kuti nekuda kweiyo KDE SC zvivakwa pachayo, ichi chaigara chiri chakaremerwa zvakanyanya desktop desktop kupfuura iya yakavakirwa paGTK, mutsauko uriko nhasi haukoshese zvachose nekuti neshanduro dzekupedzisira dzeQt dzakakwanisa kuenzanisa mashandiro eKDE SC neaya eGNOME - kunyangwe chiri chokwadi kuti KDE SC ichiri kushandisa imwe ndangariro kupfuura GNOME.
Uyu musiyano mukuru unokonzerwa nechikonzero chinotyaira kuvapo kweumwe neumwe wematafura maviri: GNOME, vateveri veiyo Apple uzivi hweMacOS, inotsvaga kupa yakanakisa mushandisi ruzivo nesarudzo shoma shoma. Ivo vanoomerera kune idiki dzidziso yekuti iyo shoma iyo mushandisi yaanofanira kusarudza kana kugadzirisa, hunowedzera kubereka kwavachave nekushandisa kwesisitimu. Ivo vanogutsikana kuti nekungovapa sarudzo "ivo vanonyatsoda" (ona kutaura kwangu kwekunyomba) mushandisi achave akanaka, muchokwadi ivo havadi zvimwe zvakawanda uye nekupesana vachivaratidza nemamwe sarudzo kuti vabudirire zvakafanana basa. haina maturo nenzira imwecheteyo vanhu vanoti "mangani mabhuku, ikozvino handizive zvekutora neni!"
Uye vane chimwe chikonzero.
Asi izvo, kune mushandisi wepakati, wevaya vane zviso ndezvechokwadi kuti iyo nzira zhinji dzaunovapa ndipo paunonyanya kuzvinetsa, ivo vanoona macomputer sezvinhu zvemashiripiti, mabhokisi matema uye setsoko ivo vanoziva kuti kana vakadzvanya pano zvakadaro chinhu chinoitika uye ivo vanodzvanya ipapo chinoitika chakadai chakadai. Kune ava vashandisi, ruzhinji rwevashandisi vekupedzisira, yakasarudzika system YAKASIYANA.
Kune vamwe vedu tinonzwa kunge tisingakwanisike neGNOME (kunyangwe ini pachangu ndichikoshesa hutsanana uye mashandiro ezvekushandisa kwayo) kune KDE SC ine chinzvimbo chakasiyana zvakasiyana: «ngatipei mushandisi sarudzo dzakawanda sezvinobvira uye ngaaite kuti asarudze sei inoda kushandisa ese maficha eiyo system.
Nenzira iyi kunyorera kwakadai saGwenview (iwo magiraidhi, mavhidhiyo uye mifananidzo yeanotarisa yeKDE SC) iri pamusoro zvakanyanya kune diki Ziso reGnome, sezvakaita gomba riripo pakati peDolphin + Nepomuk + Strigi kurwisa Nautilus kana zvirokwazvo chero mumwe graphic maneja we Mafaira aripo - zvirokwazvo Dolphin nhasi ndiyo ine simba kwazvo uye inoshanduka graphical faira maneja pane chero chikuva.
Kunyangwe izvi zvichichinjika izvo iyo KDE SC system inopa kuitira kuti mushandisi azvigadzirire munzira yavo yekushanda, uye huwandu hwesarudzo dzakapihwa nechimwe nechimwe chikumbiro chinoita kuti ive yakaoma uye inorema sisitimu kupfuura GNOME, kunyangwe, sezvandakakuudza nhasi , chirevo chehuremu cheKDE hachipo nhasi (pane masystem azvino, ehe saizvozvo) nekuda kwekugadziriswa kweiyo Qt 4.8 teki.
Chekupedzisira, nepo nzvimbo dzeGNOME-dzakavakirwa kazhinji dzichiomerera uye kumanikidza mushandisi kudzidza kudzishandisa nekudzichinjanisa nekufamba kwavo, KDE SC inokurudzira vashandisi kutsvaga nzira yakanakisa yekuishandisa uye kuigadzirisa kune zvavanoda, Ndokusaka iwe Unogona kuwana zviuru zvematafura zvinomhanya KDE SC uye ese achave akasiyana neXfce kana GNOME desktops ivo vanonyanya kufanana.
Mune yangu chaiyo kesi, manejimendi uye kushandiswa kukuru kwesisitimu kunoitwa kuburikidza neYakuake uye tmux, saka mushure mekugadzirisa zvimwe zvinhu senge saizi yefonti, mafonti, antialiase uye ruzivo rwepaneru, ini ndinoshandisa yakasarudzika tsika KDE SC 🙂
Chinhu chekupedzisira chandingade kuratidza nezve KDE SC (kunze kwezviuru zvayinayo) ndiko kutonga kwese kwayinoita pamusoro pemahwindo: nekudzvanya kurudyi pahwindo rehwindo iwe unosvika kumamenyu uko iwe unogona kutsanangura pane desktop rewindo mukati mubvunzo kana iyo yese application, saizi yepakutanga, nzvimbo yechidzitiro uye anopfuura gumi nemaviri mamwe ma parameter.
KDE SC zvirokwazvo chishamiso chinopa mushandisi kugona kuivaka kune zvavanoda uye zvavanoda.
==== Ini ndango tarisa Netrunner kupedzisa kutaura kwangu uye ndakaona kuti ndataura zvisina maturo: Netrunner haisanganise GTK neQt, inosanganisa mamwe maitiro ekare akadai seGIMP kana Inkscape ayo akagadzirwa muGTK asi huwandu hwe kunyorera ndeye GTK, APOLOGIES !!! ====
Mhinduro 1: Nezve chirevo changu: kana ndichishandisa Netrunner pamusoro zvakanyanya zvaitaridzika kwandiri sekuti yaive neGTK mafomu akatsiva mafomu eQt natvias asi ini ndinoona kuti ndataura chinhu chakapusa sezvo mabasa makuru akafukidzwa nezvikumbiro zveGTK.
Mhinduro 2: Netrunner inopa chiratidzo chekuwana Yakuake (iyo pani inotambanuka kubva kumucheto wepamusoro), kuti uishandise zvakanakisa ini ndinokurudzira yechinyakare keyboard keyboard (Alt + F12) kana imwe yakanyatsonaka kwauri maererano nekushandisa keyboard uye system, mune yangu Super (zvisizvo inonzi Windows) + Esc.
Mhinduro 3: Mushure mekudzosera iyo Kickoff yekushandisa menyu kune yekutanga KDE 4 menyu ini ndakaona kuti Netrunner inoisa kwakawanda kukoshesa pane zvimwe "zvemagariro" zvemambure, zvinonakidza pasina mubvunzo kune vamwe vashandisi asi zvakanyanyisa kwandiri.
Ngatione kana rimwe remazuva ano iwe ukatishamisa neshoko nezve ino inoshanda system ;-D
"Sezvo mabasa makuru akafukidzwa nemaGTK application."
Tsananguro inoshamisa, kuti uone kana "varoyi" veW $ vachikuudza zvinhu nezvakawanda
tsananguro uye mienzaniso.
Zvakanaka, wandibvisa mukusaziva kwangu neLinux. Ini ndakadzokera kumashure senge
ingangoita mwedzi 9 yekuyedza ndisingazive "kana tweet" iyi SO Hupenyu hwangu hwese kubva pandakaisa
minwe pabhodhi ndakashandisa W $ nekuti ndiyo yakauya yakaiswa, uye kufinhwa
Ini ndanga ndichidzidzira kuishandisa uye «shit ...» zvakanyanya ... uye yakarongedzwa mu
fomati uye inoshatisa data, mafaera, nguva uye kunyangwe Hardware; Ndakadzidza
kubata W $.
Asi ikozvino uye nerubatsiro rwe san google newe iwe usina kuzvipira
kushandira pamwe, ndadzidza zvakawanda uye ini ndatozviona sendine ruzivo rwakanyanya mukati
Linux kuti iite iyo yega system pane yangu yega laptop. Zvichiri pane netbook
iyo W $ yasara yeiyo yebasa, asi ini ndichangowana mukana a
Mint kana Fuduntu ini ndichakuisira.
Mumwedzi iyi yese; Ndakaedza kuti mangani ma distro andakawana achitsvaga akafanira uye ndinofunga
kuti ini ndakazoiwana muNetrunner, ndakabatanidzwa zvakanyanya nezvakatorwa zveArch uye na
iwo mirairo kwavari, ndakazojaira iyo .deb uye apt-tora hehehe 🙂 (hunyanzvi
yeW $, kutsvaga iko kuri nyore kwekubaya asi usingazive nei) Linux ichada
inodzidzisa kufunga uye kwete kungova imwe gwai reboka.
Ndinovimba vazhinji veavo vanoverenga iyo posvo uye vanoshandisa ruzivo rwavanowana,
siya kusatenda uye nyora komendi kana zvirinani KUTENDA
izvo hazvibhadhare chinhu uye zvinoita kuti utaridzike, uyezve zvinokurudzira kune avo
akanyora chinyorwa, achiziva kuti nguva yako haina kutambiswa.
Mamirioni OKUTENDA pane zvese zvaunopa.
«Ndinovimba vazhinji veavo vanoverenga zvinyorwa uye vanoshandisa ruzivo rwavanowana,
Mamirioni Ekutenda nezvese iwe chaunopa. »
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, zviripachena pane HUGE chikamu cheiyo ego uye kudikanwa kwekugadzirwa kwevagadziri vechimwe nechimwe chikumbiro, dingindira remifananidzo, mavara, chero.com, izvo hazvireve kuti munhu anotenda nekusingaperi nekugona kunyudza mazino avo muchikamu chakanzi software.
Zvakanaka, ini ndakapa PCLINUX monty uye mini - great distro, ndinoiona iri # 1 [uye ndakaedza akawanda] ini ndakatotenga iyo dvd online [iyo ma2 shanduro.] Ini handiwanzo kutenga iyo dvd online - asi mhando ye OS iyi yakandikurudzira. Iri kutenderera kusunungura solid rock distro. Ndine urombo nekupenga. Edza !!
Iwo makumi maviri neshanu akaverengerwa zvinyorwa zve25